people Nepal » आजको राशिफल : मंसिर २१ गते / डिसेम्बर ७ तारिख बिहिबार – प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन(दोश्रो चरण) आजको राशिफल : मंसिर २१ गते / डिसेम्बर ७ तारिख बिहिबार – प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन(दोश्रो चरण) – people Nepal
आजको राशिफल : मंसिर २१ गते / डिसेम्बर ७ तारिख बिहिबार – प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन(दोश्रो चरण)
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल मार्गशिर्ष २१ गते बिहीबार इश्वी सन २०१७ डिसेम्बर ७ तारीख पौष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथी चन्द्रमा कर्कट राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस-
सवारी साधनको प्रयोगमा ध्यान पूर्याउनु होला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झटको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रिय खवरले मन हर्षित तुल्याउला । मान्यजनको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्नेछ ।
बल प्रराक्रममा बृद्यि हुनेछ । नजिकका मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । आम्दानिका श्रोत साधन सवल तूल्याउन सामान्य यात्राको आवश्यक रहनेछ ।
स्थीर श्रेत्रमा लगानिको योग रहेकोछ । चिसोका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
पारीवारिक साथ सहयोगमा कमि महसुस हुनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला ।
कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । नयाँ मित्र प्राप्त हुनेछन ।
आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । बाणीका कारण सामान्य बादबिवादको सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । शुभ चिन्तकहरुको बृद्यि हुनेछन ।
सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । पारीवारिक कलहको सम्भाबना रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ ।
स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।
शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा समय उत्तम रहेकोछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।